မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကိုရီးယား ခရီးစဉ် Day 1
Posted by mabaydar at 1:29 AM
လာဖတ်သွားတယ်။ ဗွီဒီယိုတော့ အိမ်ရောက်မှ ကြည့်တော့မယ်။ :)
6/01/2009 9:28 AM
လည်ချင်လိုက်တာ .. ပျော်စရာကြီး :D
Yes, China immigration officer is always proper check the Myanmar passport. Even use lens n look up side down. So felt up but when u go second trip they welcome u n u will satisfied, above all the thing r bcoz of .....#%*#&^
waiting for update.nice to read :)
6/01/2009 12:12 PM
စာလည်းဖတ်သွားတယ် .. ဗီဒီယိုလည်း ကြည့်သွားတယ် ..
အဲလိုလေးရိုက်ထားတော့ အမှတ်တရလေးဖြစ်တာပေါ့ ..
သီချင်းနောက်ခံထည့်ထားတာလေးလည်း မိုက်တယ် ...
Hi andrew, They are not proper check.. they are even more than proper check.. they can check whatever they like but their attitude is just so rude. I don't know how to describe their look and face. Well may be that's the way they are. When i go in second time the attitude is the same. Coming more about ShangHai trip later on. :) May be it's just my bad luck.
မြန်မာပြည်က ကစ်ကစ်နဲ့ ကိုရီးယားမင်းသားလေးတွေရဲ့
“စာဥရေ ကိုရီးယားလာခဲ့ပါ” တေးသရုပ်ဖော်ကို။
Mysterious Road တော့ စိတ်ဝင်စားသကွာ
မလိုသူတွေကတော့ ဒီလိုပဲ ပြောကြမှာပေါ့.. သူမှ လိုက်မလုပ်နိုင်တာ... အကြံကောင်းလေးတစ်ခုတော့ ပေးမယ်နော်... အရာရာမှာ မကောင်းတာကို စမြင်တဲ့ အကျင့်ကတော့ အမြဲမကောင်းဘူးအစ်ကို... ပြီးတော့ အစ်ကိုက ကောင်းစေချင်လို့ပါလို့ပြောနေပင်မဲ့... အစ်ကို့စိတ်ရင်းထဲမှာရော တကယ်ဒီလိုရှိရဲ့လား... I wonder...
ဝေဖန်တာကို စိတ်မဆိုးပါဘူး... မလှောင်ပြောင်ပါနဲ့... အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်ကို လှောင်ပြောင်တာဟာ အတော်လေးကို ဆိုးရွားတဲ့ကိစ္စပါ... ခင်မင်လို့နောက်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ်... မဗေဒါကလဲ ကိုတောင်ငူကို ခင်မင်လို့ ခုလိုပြန်ပြောတာပါ... အရေးမလုပ်ချင်တဲ့သူဆို အဖတ်တောင်လုပ်မနေပါဘူး... ဆိုလိုတာကို သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်... စိတ်ဆိုးလို့ပြောနေတာဟုတ်ဘူးနော်...
ကိုရီယားခရီစဉ်ကို အရင်ကတည်းကစ်ိတ်ဝင်စားနေတာ။ ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး ပိုသွားချင်လာဘီ။ နောက်တင်မဲ့ပို့တွေကိုစောင့်ဖတ်နေမယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာဘဲ သွာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဦးမယ်။ ရိုက်ချက်လေးတွေလည်း ပိုပိုကောင်းလာတယ်။ ထပ်ကြိုးစားရင် ဒါရိုက်တာကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်သေတယ်။
ခရီးသွားတာ ဝါသနာပါတော့လေ ဒီလို ဗီဒီယိုမျိုးနဲ့စာမျိုးကို ဖတ်ချင်၊ သိချင်နေမိပြီး ရေးပြီးတင်မဲ့ အချိန်ကိုစောင့်နေတာ။ ဗီဒီယိုက ဒီအခေါက် ရိုက်ပေးမဲ့သူ ကောင်းကောင်းမရှိပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆွဲရိုက်နေရလို့ ထင်တယ် ခါတိုင်းလောက် သိပ်အဆင်မပြေပေမဲ့ အိုကေပါတယ်။ တည်းဖြတ်မှု အပိုင်းလည်းကောင်းပါတယ်။ သီချင်းလေးတွေကတော့ သိပ်သဘော မကျမိဘူး။ အားလုံးခြုံရ ရင်တော့ ဒီလို သွားနေတုန်း လတ်တလော ဖြစ်နေတာတွေကိုရိုက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး မဗေဒါရဲ့ အားထုတ်မှုတွေနဲ့အတူ ကြိုးစားပြီး ပြန်လည်တင်ပြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လက်ကျန် ခရီးစဉ်များအကြောင်းကို မျှော်လျက် ~~~~~~~~
If it was bad luck of you, Me also. I have the same feeling with you those China immigration - their attitude is really rude. When i went their for only 4days, they asked me when I would be back. I talked myself "even if you beg me to stay longer, I won't stay any longer after my works finished".
ခရီးစဉ်လေးကို သေသေချာချာ ဖတ်သွားတယ်
ဟုတ်တယ် အင်မီဂရေးရှင်းကို အရမ်း တီးချင်တယ် သိလား။ အရင်တစ်ခါ လာအိုသွားတုန်းကလဲ အဲ့လိုပဲ မြန်မာက တိုးရစ် ဖြစ်နိုင်လားတဲ့ ထိုင်းက မေးတယ်လေ ဘယ်မှာတည်းလဲဆိုတော့ နင်တို့ဆီမှာ ပိုက်ဆံရှိရင် မိုးပေါ် တက်တည်းလို့ရတယ်ပြောလိုက်တယ် အင်္ဂလိပ်လိုလဲ ဆဲတာတောင် နားလည်ဟန်မရှိပါဘူး ဒါပေသိ သိတယ်ဟုတ် မြန်မာစာအုပ်ဆိုရင် သူတို့ထင်တယ် မြန်မာတွေက သူတို့ထက်တောင် ကမ္ဘာပတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာ မသိဘူးထင်တယ်နော် ပြောရင်း တင်းလာပြီ ခိခိ
အိဝေဖြိုးရေ.. အားပေးစကားအတွက် ကျေးဇူးပါ.. ဒါရိုက်တာကောင်း တစ်ယောက်ဆိုတာကတော့ ဒီလောက်လေးနဲ့ မှန်းလို့တောင် မရဲသေးပါဘူးကွယ်..
မယ်ဂုမိ- အင်း နင်နဲ့ကနီးပါတယ်.. ဘယ်အချိန်သွားသွားပဲဟာ..
သီဟသစ်ရေ... နောက်ဆက်တွဲတွေလာဖို့ကကြာအုံးမယ်.. ဗွီဒီယိုတစ်ခါတစ်ခါ အက်ဒစ်လုပ်ဖို့က အချိန်တော်တော်ကုန်တယ်... အိပ်ချိန်ပါစားတယ်... အမြန်ဆုံးတင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်.. ကျေးဇူးပါ..
ရှေးစာဆိုရေ... နားလည်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ.. ဂျပန်သွားတုန်းကလဲ ရိုက်ပေးမဲ့သူမပါပါဘူး.. ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ဆွဲရိုက်ခဲ့ရတာပါပဲ... ဒါပေမဲ့ အဲဒိတုန်းကတော့ ၁ယောက်ထဲပင်မဲ့ အချိန်ရတော့ တစ်ခါတစ်လေ စတန်းထောင်ရိုက်တော့ ကင်မရာငြိမ်ပါတယ်... ခုတစ်ခေါက်ကတော့ အမေကလဲ သိပ်မရိုက်တတ် စတန်းကလဲ မေ့ကျန်ခဲ့တာရော.. အချိန်လဲ သိပ်မရတာနဲ့ စိတ်ကြိုက်မရိုက်ခဲ့ရပါဘူး...
ဒီခရီးစဉ်ကို Music video လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေတော့ရှိပါတယ်.. လုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်တော့ မသေချာပါဘူး... ခုဟာကတော့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းသက်သက်ဆိုတော့ စိတ်ထဲရှိရာလျှောက်ထည့်လိုက်တာပါ... အမှန်တော့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေထည့်ရတာ ပိုနားထောင်ကောင်းပေမဲ့ Youtube တို့ Facebook တို့က အင်္ဂလိပ်သီချင်းဆိုရင် copyright ဆိုပြီး ဖြတ်ပစ်တတ်ကြတယ်လေ... ဒီတော့ ကော်ပီရိုက်မရှိတဲ့ မြန်မာသီချင်းနဲ့လုပ်လိုက်တာပါ... နောက်လက်ကျန်ခရီးတွေကတော့ စာချည်းပဲဆိုရင်တော့ မြန်မယ်... ဗွီဒီယိုပါဆိုရင်တော့ ကြာအုံးမယ်.. format တောင် convert မလုပ်ရသေးဘူး.. ဟီး.. ဟီး.. ကြိုးစားပါ့မယ်...
Thint Swe ရေ.. တူတူပါပဲ... မဗေဒါလဲ အဲလိုပါပဲ.. သူတို့ကနေဆိုလို့တောင် မနေပါဘူး.. ဆိုးတာက မဗေဒါတို့က Transit ပါ သူတို့ လေဆိပ်ကနေတောင် မထွက်ပါဘူးဆိုတာကို အဲလောက်စစ်နေတာက လွန်လွန်းလို့ပါ... ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာလဲ တရုတ်နဲ့ မဟာမိတ်လို့ထင်တာပဲလေ... (တိဝူး.. တော်ဘီ.. ကြောတော့ဝူး)
မဆုမွန်.. ဟုတ်ပါတယ်.. မြန်မာတွေ ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ သူတို့မှာ knowledge မရှိတာ သူတို့ကိုက ညံ့တာပါ.. ဟတ်.. ဟတ်...
6/02/2009 10:17 PM
Hi Ma Baydar,
I haven't been to Shanghai & Korea but my experience with Singapore, Thailand, Japan, France are the same with your experience with the immigration officer in Shanghai.
My visit to SG in 2001 was my first foreign trip. I fought with the immigration officer and challenge her to deport me. But finally she gave me 1 month visa.
At Japan's immigration in Osaka, I had to wait for about 40 min. I don't know what he was doing with my passport. He madeacouple of phone calls and by that time, I didn't know Japanese.
At France's immigration in Paris, they asked me several documents and checked many things including my hand carry baggage. I was the last one passing the immigration from the plane. :)
I was rejected3times while I applied visa to Thailand. :( By that time, I had been to almost all the continents of the world. :)
Moreover, all of my trips were business trips, not for pleasure purpose. So, I had enough documents to show any officials.
Since we are Burmese and Burmese passport holders, they check. I just take it as testing my temperament.
BUT the US immigration asked me nothing. At the US immigration in Chicago, I was prepared to show all related documents. I thought they might ask me and checked me as other immigrations did. Fortunately or I don't know why till now, they checked my visa as usual and asked me how long I planned to stay. I said 10 days. The officer tookalook at my face and told me to take6months. :) Moreover, he also said "Welcome to America ! !" and returned my passport.
ဟေးပျော်စရာကြီး ...Korea ခရီးသွားမှတ်တမ်း ဖတ်သွားတယ်နော်...
I so envy u =(
Wish i culd go there wif u guys too..
Waiting for the up coming episodes..
မင်းသမီးက အခုမှ ထွက်လာတယ် :D
တည်းဖြတ်တာ တော်တော် လက်တက်လာတယ်။
စကားမစပ် “Don’t Chop on my passport” လို့ ပြောတာ မှားနေတယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော် မှားတာလဲ ဖြစ်နိူင်ပါတယ်လေ......
6/04/2009 5:30 AM
ဒီနေ့ ဗီဒီယိုလာကြည့်သွားတယ် မဗေဒါက စကားပြောတာ ချစ်စရာပဲ..အမေကလည်း ပျော်နေတယ်..သူငယ်ချင်းကလဲ ပါတော့ ပျော်စရာကြီးပဲ ကိုရီးယားမင်းသားလေးတွေ တွေ့ခဲ့လားဟင် မင်းဘယ်မှာလဲ အချစ်လေးဟီးဟီး
လမ်းမကြီးကို သေသေချာချာကြည့်ချင်တယ် မဗေဒါက စိတ်လောတယ်ထင်တယ် ကားပွတ်တော့မလို့ တွေဲ့လိုက်တယ် သတိထားပါ မဗေဒါရေ ဆက်ကြည့်ချင်သေးတယ်နော် ပြောပြပေးဦး ကျွန်မ ခရီးထွက်တာ အရမ်းဝါသနာကြီးတယ်
အင်း.. ကိုဟတ်ကြီးရေ.. မဗေဒါမှားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... စကာင်္ပူမှာအနေကြာတော့ စင်းဂလိပ်ပဲ တတ်တယ်ကွယ်.. ကိုဟတ်တို့လို အမေကြီးကားမှာနေရင်တော့ proper အင်္ဂလိပ်တတ်ဖို့ မျှော်လင့်တာပဲ... အဲလိုပြောလို့ အေးဂျင့်က တရုတ်မက သင်ပေးလိုက်တာပဲကွယ်.. အမှန်ကဘာလဲ ပြောပြပါလားဟင်... နောက်မမှားအောင်ပေါ့...
Hi Wunna Ko Ko
I do know how u feel. I also feel the same whenever i go other country. and i do think we blame the same person... :)
Actually in my post i wrote i blame to myself... yeah.. part of it i blame.. but most of the blame goes to someone you-know-who.
When i went to Japan, they didn't check too much on me. It take onlyafew mins.. they do check on me more than others... but they didn't take 40mins.
Thailand rejected3times? actually their country not much better than ours. Just that the whole world know where is Thailand but most people don't know where is myanmar. Well, May be that's the big different.. haha...
Anyway, Thanks for ur honest comment.
မဆုမွန်ရေ.. ကိုရီးယားမင်းသားလေးတွေ တွေ့ခဲ့ပါတယ်... ပိုစတာတွေလေ.. ဟီး.. ဟီး.. ဒါတောင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မင်းသားတိုင်းတော့ မတွေ့ခဲ့ပါဘူးကွယ်..
ဆိုလ်းက မဗေဒါတို့တည်းတဲ့ ဟိုတယ်မှာ ပြန်မဲ့နေ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ အဖွဲ့နဲ့ တိုးလိုက်သေးတယ်.. မင်းသားတော့ ပါဘူး.. မင်းသမီးပဲပါတယ်.. မင်းသမီးကလဲ ကိုယ်သိပ်မကြိုက်တဲ့ မင်းသမီးဖြစ်နေတယ်... မိုက်ပါဘူး.. အဲအကြောင်း နောက်ပိုစ့်တွေကျရင်လာပါလိမ့်မယ်...
ပထမ တစ်ချက်အနေနဲ့ စပြောရရင် အရမ်းလှတယ်။ ပေါက်ကရမတွေးနဲ့။လေယာဉ်ပေါ်က မယ်လေးတစ်ယောက်ကိုပြောတာ။ ဒုတိယ အနေနဲ့ပြောရရင် အဖွဲ့ထဲမှာ မျက်မှန်နဲ့မမက သူရီတဲ့အခါ သွားတွေပျောက်သွားသလားလို့မြင်မိတယ်။ စိတ်မဆိုးနဲ့။ စိတ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးပေါ့ ဟွန်း၊၊ တတိယက မဗေဒါရဲ့အမေကို မရှက်ပါနဲ့လို့။ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်ချင်လွန်းတဲ့ သမီးကို မင်းသမီးအခန်းကနေ စပို့ လုပ်ပေးရတယ်လို့ သဘောထားပါလုို့။ အားလုံးခြုံရရင် တော်တော်နွေးတယ်။ ဟိတိစတာ။ အားလုံးကောင်၏။။